किमबारे फेरी नयाँ दाबा: कोमामा गए किम! - Himal Dainik
किमबारे फेरी नयाँ दाबा: कोमामा गए किम!
काठमाडौँ ८ भाद्र २०७७, सोमबार ११:२७
उत्तर कोरियाका तानाशाह किम जोङ उन कोमामा गएको दाबी गरिएको छ। उत्तर कोरियाका पूर्व इन्टेलीजेन्स अफिसर चाङ्ग सोङ्–मिनले कोरियाली लिडर उन कोमामा गएको पुष्टि गरेको अन्तराष्ट्रिय संचार मध्यमले जनाएका छन्।
अन्तराष्ट्रिय न्युज एजेन्सी डेलीमेलसंग कुरा गर्दै मिनले उन कोमामा गएको तर उनको जीवन अन्त्य नभएको खुलासा गरे। त्यस्तै उनले अहिले उत्तर कोरियाको बागडोर उनकी ३३ वर्षीया बहिनी किम यो–जोंगले आफ्नो हातमा लिइएको बताए। केहो महिना अघि जोंग उन पछि दोश्रो नम्बरमा रहेको बताइएको थियो। उनले यस अघि पनि आफ्नो दाजुलाई सरकार चलाउन सहयोग गरेको मेलले बताएको छ।
किम जोङ उनको स्वास्थ्य बारे यसरी समाचार आएको पहिलो पटक भने होइन ।केहि महिना अघि पनि उनको बारेमा विभिन्न अड्कलबाजी भएका थिए। अप्रिल १५ मा उनको हजुर बुवा किम इल सुंगको जन्मदिनको वार्षिकोत्सव समारोहमा उपस्थित भएनन् । त्यसपछि अन्तराष्ट्रिय मिडियामा उनको स्वास्थ्य बारे विभिन्न टिका-टिप्पणीहरु गरेका थिए । पहिलो पटक आफ्नो हजुर बुवाको वार्षिकोत्सव समारोहमा उपस्थित नभएपछि कसैले उनको मृत्यु भईसकेको देखी उनको कार्डियोवेस्कुलर सर्जरी भएको दाबी गरे। त्यसको २० दिनपछि उनले यो सबै प्रश्नहरुको जबाफ दिएका थिए। उनि एक मल कारखाना उदघाटन गर्न पुगेपछि यो सबै कुरा झुठो भन्ने पुष्टि भएको थियो। उनको स्वास्थ्यको बारेमा फेरी एक चोटी प्रश्न उठेको छ।
|तस्बिर: केहि महिना अघि कारखाना उदघाटन गर्ने क्रममा किम संगै उनको बहिनी किम यो जोंग (किमको दाँया )।
अघिल्लोकन्ट्याक ट्रेसिंगमार्फत गण्डकी प्रदेशमा ८ मा देखियो कोरोना
पछिल्लोमालदिभ्समा पनि कोभिड १९ का सङ्क्रमित बढ्दै